Ilungiselela ukulungiswa kwenqaba yezingane engenacala | I-GFUN
Ilungiselela ukulungiswa kwenqaba yezingane engenacala
1. Kufanele kunqunywe iqembu leminyaka le-Naughty Fort Paradise. Kuyisikole esihle esineminyaka engu-0-6, noma ungena nje esikoleni.
2. Indawo ye-Naughty Fort Paradise nayo ibhekwa njengemihle. Uma lincane kakhulu, lingathinta izinkinga zebhizinisi zesikhathi eside. Kumele ihlolwe ngokucophelela ngokuya ngesimo sezimali zayo. Okunye ukufaka imali lapho izinhlobo zezinto zokudlala zezingane kufanele ziqhathaniswe futhi zihlaziywe. Inqaba yendabuko engabonakali inezindleko eziphansi nokuxhumana okuphansi. Lesi sigodlo esisha sikagesi esinamabala sinokuxhumana okuqinile komzali nengane, ukuphepha nenhlanzeko, futhi imvelo evulekile iwumuzwa ogqamile. Kubalulekile futhi ukukhetha indawo ngasikhathi sinye. Kuyadingeka ukwenza uhlolo lwamathemba webhizinisi njengokuhamba kwethrafikhi endaweni ezungezile yethrafikhi. Kungcono ukukhetha indawo enkulu yezitolo, ezitolo ezinkulu ezitolo ezinkulu, umphakathi omkhulu, njll., Futhi ukuthandwa kuyona okunquma imali.
3. Kuyisinyathelo esibalulekile ukukhetha umenzi wemishini yezingane yokuhlanza isikhwama sezingane. Kungcono ukuthi abatshalizimali bakwazi ukuya efektri ukuvakasha kwensimu, ukubona isimo semisebenzi yabo kanye nobukhulu bendawo, nokuthi babe ikhwalithi yokukhiqiza, idumela nesikhathi sokulethwa kwenkonzo ngemuva kokuthengisa, njll. ukwenza uchungechunge lwamalungiselelo.
Inkampani ye-4.GFUN isebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni imishini yokuzijabulisa engenamandla, imishini yokuzijabulisa emanzini, imishini yokuzijabulisa epaki yamanzi, imishini yokujabulisa izingane, imishini yokuzijabulisa yezingane zasendlini, imishini yokuzijabulisa yezingane zangaphandle, imishini yokuzijabulisa yangaphandle nemishini yokuzijabulisa eyenziwe ngezifiso. Siyinkampani yemishini yokuzijabulisa ebanzi ebanzi, enikela abathengi ngocwaningo nentuthuko, ukuklama, ukukhiqiza, ukuthengisa, ukufaka, izinsizakalo ezenziwe ngezifiso.
I-GFUN yemukela amakhasimende ukuthi avakashele futhi axoxe ngokubambisana.Ungaxhumana nathi nganoma yisiphi isikhathi uma unemibuzo.